ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ | Myanmar President Office
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ပထမနေ့ကို ရန်ကုန်မြို့ Park Royal Hotel ၌ ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ကျင်းပသည်။
အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပု၊ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မောင်တောဒေသစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီဝင်များနှင့်အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၊ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးနှင့် အာဆီယံ လူသားချင်းစာနာမှုညှိနှိုင်းရေးမှူးရုံး (AHA Centre) တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဖိတ်ကြားထားသော နိုင်ငံတကာသံတမန်များ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ကြသည်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားရာတွင် အစိုးရအနေဖြင့် စတင် တာဝန်ယူချိန်ကတည်းက ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသည့် ပြဿနာများဖြစ်ပွားရခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းများကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်နိုင်ရန်နှင့် သိမ်မွေ့နက်နဲသည့် အရေးကိစ္စများကို ဖြေရှင်းနိုင်မည့်ရေရှည် နည်းလမ်းကောင်းများကို ဖော်ထုတ် အကြံပေးနိုင်စေရေးအတွက် ကိုဖီအာနန်ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ကို အားလုံးသိရှိပြီး ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ ကော်မရှင်၏ အကြံပြုချက်များသည် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကြုံတွေ့နေရသည့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်း၊ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းများကို ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် ရေရှည်ပဋိပက္ခ ကင်းဝေးရေးအတွက် အရေးပါသည့် အကြံပြုချက်များဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် နိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိမည့် အကြံပြုချက်များကို တစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ ကြောင်း။
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားမှုများမရှိခဲ့ပါက ယခုအခြေအနေထက် များစွာတိုးတက်မှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ယင်းဖြစ်စဉ်များကြောင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ နှောင့်နှေးခဲ့ပါကြောင်း၊ သို့ရာတွင်၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း ယခုအချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၌ မတူညီသည့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ထပ်မံဖြစ်ပွားသဖြင့် နှောင့်နှေးခဲ့ရပါကြောင်း၊ ယင်းအခက်အခဲကိုလည်း ကျော်လွှားနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ အမှန်အတိုင်းပြောရပါက အကြံပြုချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်သည် အလွန်သိမ်မွေ့ပြီးခက်ခဲသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့သော် အစိုးရ အနေဖြင့် အင်တိုက်အားတိုက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ကြုံတွေ့နေရသည့် ပြဿနာအများစုသည် ကာလရှည်ဖွံ့ ဖြိုးရေးနိမ့်ကျခဲ့မှု၊ ယုံကြည်မှု အားနည်းခြင်းများကြောင့် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကို အတူတကွတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပြီး ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် သဘောတူညီမှုရရှိရေး ဆွေးနွေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ခန့်မှန်းထားသည်ထက် ပိုခက်ခဲခဲ့ပါကြောင်း။
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးမရှိဘဲ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မည်သည့်လုပ်ငန်းကိုမျှ ဆောင်ရွက်၍မရသည်ကို အားလုံးနားလည်ကြမည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ ရေရှည်တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် လူမှုသဟဇာတဖြစ်ရေး သည် အရေးပါသောကြောင့် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊ နောက်ထပ်အရေးကြီးသည်မှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသည့် လုံခြုံရေးအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေး၊ နေရပ်စွန့်ခွာသူများကို ပြန်လည်လက်ခံနေရာ ချထားပေးရန်နှင့် အနာဂတ်တွင် အလားတူ ပြဿနာများ မဖြစ်ပွားစေရန် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးသည် အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်ပါကြောင်း၊ အစိုးရအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို မြှင့်တင်နိုင်ရေး စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အတူပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများကို ဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ အစိုးရ စတင်တာဝန်ယူစဉ်ကပင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သကဲ့သို့ တည်ငြိမ်မှုရှိစေရေး ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခုအချိန်တွင် ရခိုင်အပါအဝင် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် တိုးတက်မှုများကို မြင်တွေ့နေရပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း။သိသာထင်ရှားသည့် သာဓကတစ်ခုကို ပြရမည်ဆိုပါက ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ပြီးခဲ့သည့် (၂)နှစ်တာကာလအတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရေးစသည့် အခြေခံအဆောက်အဦများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်ကို ပြလိုပါကြောင်း၊ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အခြေအနေများ ပုံမှန်ပြန်လည်ဖြစ်စေရေးနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရေးအတွက် အခြေခံကျသည့် လိုအပ်ချက်ဖြစ်သကဲ့သို့ ငြိမ်းချမ်းပြီး သာယာ၀ပြောသည့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် အရေးပါပါကြောင်း။
IDP စခန်းသုံးခု ပိတ်သိမ်း
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း IDP စခန်းများ ပိတ်သိမ်းရေး လုပ်ငန်းများကို အကြံပြုချက် မတိုင်မီကတည်းက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ အကြံပေးကော်မရှင်၏ ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းပြီးပြီးချင်း IDP စခန်း သုံးခုကို ပိတ်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ နောက်ထပ် တစ်ခုကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ပိတ်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခုနှစ်တွင် ပိတ်သိမ်းဆဲ စခန်းတစ်ခုကို စနစ်တကျ ပိတ်သိမ်းနိုင်ရေး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း IDP စခန်းများ ပိတ်သိမ်းရေး အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာ(မူကြမ်း)ကို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ညှိနှိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပါကြောင်း။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်သည်လည်း အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် နိုင်ငံတိုင်းတွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ရှိကြသကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ရှိပါကြောင်း၊ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်ရန် ပထမအဆင့်အရေးပါသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အကြံပြုချက်အကောင်အထည်ဖော်ရေးတွင် အာဆီယံ၏ အခန်းကဏ္ဍကလည်း အရေးကြီးပါကြောင်း။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် နားလည်မှုအပြည့်အဝဖြင့် အစဉ်တစိုက် ကူညီပေးခဲ့ကြသည့် အာဆီယံနိုင်ငံများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း၊ အစိုးရအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းသာယာ၀ပြောရေးအတွက် အားသွန်ခွန်စိုက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် မိတ်ဖက်နိုင်ငံများ၊ အဖွဲ့အစည်းများအနေနှင့် နားလည်မှုရှိစွာဖြင့် ပါဝင်ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးကြရန် ဖိတ်ခေါ်လိုပါကြောင်း၊ ယနေ့ ဆွေးနွေးပွဲမှ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရာမှ ရှေ့ဆက် ဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုပါ ပုံဖော်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ၏ အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင် Rt. Hon. Lord Darzi of Denham က ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု တိုးတက်မှုများကို မြင်တွေ့နေရပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရင်ဆိုင်နေရသည့် အခက်အခဲများသည် အခုမှကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲများမဟုတ်ဘဲ ကာလရှည်ကြာ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် သိမ်မွေ့စွာဖြေရှင်းရမည့် လုပ်ငန်းများညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးမှုများကတစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ခြင်းကြောင့် ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများတွင် ရလဒ်ကောင်းများ ရရှိလာစေရေး နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေဖြင့် ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်းလိုပါကြောင်း မှတ်ချက်ပြုစကားပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ ကဏ္ဍအလိုက်ဆွေးနွေးပွဲများကို ဆက်လက်ကျင်းပရာ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အစီအစဉ်၏ သဘာပတိအဖြစ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူအဖြစ် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာကိုကိုနိုင်နှင့် ပြန်လည်ဆွေးနွေးသူအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြတို့က ဆောင်ရွက်ကြသည်။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီအထောက်အပံ့ပေးရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း(UEHRD) ၏ အခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ချက် အစီအစဉ်၏ သဘာပတိအဖြစ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူအဖြစ် UEHRD ညှိနှိုင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်၊ ပြန်လည်ဆွေးနွေးသူအဖြစ် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးတို့က ဆောင်ရွက်ကြသည်။
ကဏ္ဍအလိုက် ဆွေးနွေးမှု ဖြေကြား
ယင်းနောက် အာဆီယံလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးဗဟိုဌာန(AHA Centre) နှင့် အာဆီယံအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးနှင့် ဆန်းစစ်လေ့လာရေးအဖွဲ့ (ERAT) တို့၏ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီပေးရေး အခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ချက် အစီအစဉ်၏ သဘာပတိအဖြစ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူ၊ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူများအဖြစ် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ၏ အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ဦးထွန်းမြတ်နှင့် AHA Centre မှ Deputy Executive Director, Mr. Arnel Capili တို့ကလည်းကောင်း၊ ပြန်လည်ဆွေးနွေးသူအဖြစ် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ၏ အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ဦးလှမြင့်တို့က ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး တက်ရောက်လာကြသူများက အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ပထမနေ့၏ ကဏ္ဍအလိုက် ဆွေးနွေးမှုများအပေါ် သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းကြရာ တာဝန်ရှိသူများက ပြန်လည်ဖြေကြား ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူနှင့် အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့တို့နှင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပွဲများ၌ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က ပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောကြား
ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ကျွမ်းကျင်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လူငယ်စင်တာဖွင့်ပွဲတက်ရောက်
မောင်တောမြို့နယ်၌ စိတ်ကြွဆေးပြား၁၂၅၀နှင့် စိတ်ကြွဆေးအကြေမှုန့် ၈ဂရမ် သိမ်းဆည်းရမိ
မောင်တောမြို့နယ်၌ စိတ်ကြွဆေးပြား ၄၅၄၆၇၀ သိမ်းဆည်းရမိ
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးစိုးဟန်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သံအမတ်ကြီးအား ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ၍ နေရပ်စွန့်ခွာသွားသော ဟိန္ဒူဘာသာဝင် (၄၄၄)ဦးအား ဆောလျင်စွာ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ရေး ထပ်မံပြောကြား
မောင်တောမြို့နယ်၌ ပိုင်ရှင်မဲ့ လှေတစ်စင်းနှင့်အတူ သေဆုံးပုပ်ပွနေသည့် ကျွဲ၊ နွားများတွေ့ရှိ
ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအရေးမျက်နှာစာများ၌ နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေး၊ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ရပ်တည်ရေးသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ မူဝါဒရပ်တည်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်းအတည်ပြု